Voces Bolivianas: Tetikasa Median’olon-tsotra (Fizarana Voalohany) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Avrily 2018 11:30 GMT
Hatramin'izao dia efa nijery ny antsipiriany tamin'ny roa tamin'ireo dimy nahazo ny loka momba ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra Rising Voices izahay. Tamin'ny volana jolay, nanasongadina ny ivontoerana Nari Jibon ao Bangladesh izahay, izay mampianatra ny fahaiza-mamaky ny aterineto 2.0 ho an'ireo tanora Bangladeshita vehivavy ao an-drenivohitra Dhaka. Tamin'ny volana Aogositra, namindra ny tranokalanay tany Kolombia izahay ary nahita fa nahazo tombontsoa tamin'ny tambajotra vaovaon'ny tranomboky ao an-tanàna ireo bilaogera ao hampianarana ny media ifarimbonana ho an'ny tanora atao anjorombala any amin'ny faritra manodidina an'i Santo Domingo sy La Loma.
Fotoana izao hampifantohana ny masontsika any El Alto, Bolivia, izay any amin'ny 4150 metatra (13,615 amin'ny tongotra) ambonin'ny ranomasina, ary iray amin'ireo tanàna avo indrindra manerantany. Iray amin'ireo mahantra indrindra koa izy. Amin'ireo tanora Boliviana amin'izao fotoana izao, El Alto no fantatra indrindra ho ivontoeran'ny Adin'ny Etona Boliviana tamin'ny taona 2003 – 2005, izay nanakana matetika ny fidirana ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena, sy nanakana ny fizarana solika sy etona. Azo inoana fa nandray anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'izao fotoana izao, Evo Morales ny zava-misy, satria nanao fampielezan-kevitra goavana tamin'ny fampanantenany hanome ny tahirin-tsolika voajanahary ao amin'ny firenena hotantanin'ny fanjakana ny filoha.
Ny andraikitr'ireo mpikatroka ao El Alto anefa no nampiteraka ny fitsarana an-tendrony mahazatra fa ny tanàna ambanivohitr'i La Paz dia toeran'ireo komonista mpikomy. Saika resaka politika foana matetika ny sarin'i El Alto amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra amin'ny teny Anglisy sy Espaniola.
Ny tanjon'ny Voces Bolivianas dia ny hanaisotra ireo fitsarana an-tendrony ireo sy hanome fahafahana ho an'ny Alteños mba hilaza ny tantarany manokana. Araka ny fanazavan'ny About Page momba ny tetikasa:
Ao amin'ny bilaogin'ny tetikasa Rising Voices, nanadihady ny fomba nanomanan'izy ireo ny ezaka fanentanana nahomby i Eduardo Ávila, Hugo Miranda, ary Mario Duran. Rehefa avy nahita cybercafe sahaza sy nizara ireo bokikely tao amin'ny Universidad Publica de El Alto mba hitadiavana mpandray anjara, nanao ny asa avy hatrany izy ireo ary nanatontosa ny atrikasa voalohany tamin'ny 22 Septambra 2007.
Amin'ny ankapobeny, 23 ireo mpandray anjara mavitrika niseho. Azonao atao ny mitsidika ny bilaogin'ny tsirairay ao amin'ny Voces Bolivianas El Alto aggregator.
Raha jerena fa Aymara ny 79% amin'ireo mponina any El Alto, mikasa hitady mpandika teny vonona handika lahatsoratra avy amin'ny teny Espaniola mankany amin'ny teny Aymara ny ekipan'ny Voces Bolivianas. Nitarika azy ireo ho any amin'i Dora Romero ny ezaka nataon'izy ireo, mpianatra mandritra ny tontolo andro sy mpandika teny mandritra ny tapak'andro ao amin'ny Oniversitem-panjakana ao Al Elto. Ny vokany? Bilaogy voalohany indrindra amin'ny teny Aymara.
Ankoatra ny vondrona mpanangom-baovao, nasongadina tao amin'ny pejy voalohan'ny tranonkalan'ny Voces Bolivianas ihany koa ny sasany tamin'ireo lahatsoratra mahaliana indrindra. Adika tamin'ny teny Anglisy sy Aymara avy eo ireo lahatsoratra nisongadina.
Amin'ny lahatsoratra manaraka, hijery akaiky ny sasantsasany amin'ireo lahatsoratra nasongadina sy ny fomba nifidianan'ny Alteños mba hamaritana ny fiainan'izy ireo manokana, ny fiarahamonin'izy ireo manokana izahay.